SAGAALKII Xiddig Ee Chelsea Sibiqda Kaga Baxsaday Markii Uu Roman Abramovich La Wareegay Mulkiyaddeeda - GOOL24.NET
SAGAALKII Xiddig Ee Chelsea Sibiqda Kaga Baxsaday Markii Uu Roman Abramovich La Wareegay Mulkiyaddeeda
Waayaha quruxda badan iyo guulaha ee Chelsea waxa uu soo bilowday markii uu Roman Abramovich la wareegay mulkiyaddeeda sannadkii 2003. Waa waqtiga ay sida dhabta ah lacagtu u beddeshay Premier League.
Stamford Brige ayaa waxa markiiba uu Roman Abramovich ku qurxiyey xiddigo waaweyn oo uu iskaga keenay daafaha dunida, kuwaas oo uu gacanta u geliyey Jose Mourinho oo waqtigaas dunida is-baray. Horyaalka ayay si degdeg ah ugu guuleysteen, waxaana cududdii seeska loogu dhigay lacagtu uu illaa hadda ka dhigay Chelsea naadiga weyn ee koobabka ku tartamaya.
Waxa Chelsea hal-hays ka noqotay kalmadda ah ‘Stamford Bridge lagama ogola xilli-ciyaareed nacas ah’, sababtuna waxay ahayd inay heli karayeen ciyaartoy kasta oo ay u baahdaan.
Sidaas oo ay tahay, Roman Abramovich waxa uu ku fashilmay oo ay lacagtiisu u goyn weyday ciyaartooyo uu wax walba u sameeyey, kuwaas oo iyadoo tallaabooyin uu u jiro haddana si sibiq ah kaga baxday.
Xasuusta ugu weyn iyo xiddiga ay tahay in la xuso, waa Steven Gerrard oo sannadkii 2005 u gubiyey Liverpool codsi ah in la fasaxo si uu ugu biirokooxda galbeedka London ka dhisan ee Chelsea, laakiin kooxdiisa ayaa ku dhegtay, iyadoo uu kaddibna kula guuleystay Champions Leagyue.
Ciyaartoyda kale ee iyagana ay Chelsea u dhowaatay waxa ka mid ahaa Alessandro Nesta oo £35 milyan oo Gini ay ku dalbadeen sannadkii 2003, waxaana haddii ay saxeexiisa ku guuleysan lahaayeen uu noqon lahaa difaaca ugu qaalisan taariikhda kubadda cagta waqtigaas.
Nesta oo waqtigaas hal sano oo kaliya joogay AC Milan, kulana guuleystay Champions League ayaa fikir dheer kaddib go’aansaday inuu sii joogo San Siro Stadium.
Dalabka kale ee waallida ahaa waxa uu ahaa midkii uu Roman Abramovich hor-dhigay Real Madrid oo uu ka doonayay halyeyga reer Spain ee Raul Gonzalez. Miiska Real Madrid ayaa waxa gaadhay dalab xambaarsan £71.4 milyan oo Gini oo ay Chelsea ku doonaysay Raul, balse Los Blancos ayaa diiday inay iibiso.
Xiddigaha kale ee Chelsea ay u dhowaatay saxeexyadooda waxa ka mid ahaa, Christian Vieri oo sannadkii 2003 ay isku dayeen, Edgar Davids oo isla sannadkaas ay Juventus u diiday inay ka iibiso, Ronaldinho oo waqtigii uu Barcelona joogay iyo ka hor intii aanu imanin ee uu PSG u ciyaarayay ay isku dayeen iyo sidoo kale, Gianluigi Buffon, Kaka iyo Roberto Carlos.